Wargeyska El Mundo Oo Kashifay Saddexda Kooxood Ee Soo Dalbaday Cristiano Ronaldo & Sababta Uu Ku Diiday Ka Hor Ku Biiristiisa Juventus | Laacib.net
Bilooyin ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin heshiiska uu Cristiano Ronaldo ku aaday Juventus ayuu xiddigaan qaatay go’aanka uu kaga baxayo Real Madrid, wuxuuna ka careysnaa inuusan aheyn kan ugu mushaarka badan dunida.
Wuxuu dalbaday mushaar dhan 25 Malyan oo Yuuro ama 30 Malyan oo ay ku jiraan gunnooyin dheeraad ah balse si walba wuu ka hooseeyay mushaaraadka Lionel Messi kadib heshiiska uu dhawaan u saxiixay kooxdiisa Barcelona.
Ronaldo ayaa ka dhaadhiciyay wakiilkiisa Jorge Mendes inuu ka guurayo Santiago Bernabeu, waxeyna taas sababtay in wakiilka uu hortago Florentino Perez isla markaana uu u sheego inuu xiddiga reer Portugal sii joogi doonin kooxda caasimada, waxey heleen jawaab fiican oo aheyd inuu iska bixi karo hadii uu helo koox ku iibsan karta 100 Malyan oo Yuuro.
Sida lagu qoray wargeyska El Mundo ee kasoo baxa Madrid, kooxdii ugu horreysay ee dalab usoo dirta xiddigaan waxey noqotay kooxda Ac Milan oo soo bandhigtay dalab dhan 150 Malyan oo Yuuro, balse Ronaldo ayaa iska diiday maadaama sanadahii ugu dambeeyay aysan safka hore ka aheyn kubadda cagta.
Manchester United ayaa noqotay kooxdii labaad ee damacda Ronaldo, waxeyna u dhaqaaqeen iney dib ugu soo celiyaan Old Trafford, balse dalabkooda oo aad u hooseeyay darteed, Real Madrid diyaar uma noqon iney dhageysato.
Wixii markaas ka dambeeyay Paris Saint Germain ayaa lasoo xiriirtay Jorge Mendes, taasoo shuruud adag hordhigtay wakiilka, waxey u sheegeen iney la saxiixan doonaan Ronaldo maalinta ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda si aysan Real Madrid fursad ugu helin saxiixa Neymar ama Mbappe, balse CR7 wuxuu u arkay qatar wuuna iska diiday.
Cristiano Ronaldo ayaa si nafsiyan ah u gareystay in Juventus ay tahay meesha ugu habboon ee uu tagi karo, wuxuuna ku tixgeliyay iney yaraantiisii isku dayeen saxiixiisa.
“Waan jeclahay sababtoo ah waa koox agaasiman, mana iloobi karo iney isku dayeen saxiixeyga markii aan ahaa Sporting CP” ayuu yiri CR7.
Sidoo kale wuxuu ku qiimeeyay guulahooda maxaliga ah iyo sida joogtada ah oo ay hormarka uga sameeyeen Champions League, wuxuuna quuldareynayaa iney mar kale ku guuleysan karaan tartanka aysan arkin muddo ku dhaw rubuc qarni.
Dhanka kale waxa jirtay iney jamaahiirta Juventus u sara-kaceen kadib markii uu qalaama-rogaal ka dhaliyay kulan ka tirsan Champions League kana dhacay Turin.
Ugu dambeyntii sida warbixinta lagu shaaciyay Florentino Perez wuxuu isku dayay inuu Cristiano Ronaldo ka hor istaago inuu baxo, balse ugu dambeyntii wuxuu ka dagay Turin isagoo 7-gool ku lug yeeshay 7-dii ciyaarood ee kooxdiisa kulamada horyaalka 4-caawinaad iyo 3-gool.